Pokémon Go leaks ọzọ na vidiyo nke egwuregwu egwuregwu | Gam akporosis
More nke Pokémon Go gameplay si vidiyo na YouTube
Ijikọta ezigbo ụwa na nke Pokémon bụ n'ezie echiche amamihe na nke ahụ na-achịkwa iji bulie atụmanya maka ihe ọ ga-abụ n'ịchọ Pokemon ọhụrụ site na agbata obi anyị ma ọ bụ mgbe anyị gara obodo ọ bụla.
Onwa gara aga ka anyi zutere ihe egwuregwu sitere na Niantic Labs ma ugbu a bụ mgbe anyị nwere ọtụtụ n'ime ya site na vidiyo ọzọ na YouTube igosi oge 9 zuru ezu nke ahụmịhe onye ọrụ ga-enweta mgbe ọ dị na ụwa.
Ekwuputara ọnwa ole na ole gara aga wee setịpụ oge ụfọdụ n'afọ a, Pokemon Go bụ egwuregwu mkpanaka ọhụrụ sitere na Niantic Labs, otu ụlọ ọrụ ikpeazụ ga-enweta Alphabet.
Na echiche tinye na gam akporo na iOS ngwaọrụ, ebumnobi nke egwuregwu bụ chịkọta, zụọ na ọgụ na odide Pokémon site na iji ọnọdụ GPS ekwentị gị. Ga-abụ akụkụ nke ụfọdụ ndị otu atọ dị na ihu ndị egwuregwu ndị ọzọ. Ozugbo ị bụ akụkụ nke atọ, ị ga-ahụ ezigbo ebe maka mgbatị ahụ iji wee nye Pokémon gị onyinye. Nke a bụ ebe nkwekọrịta na ndị otu ga-abata iji mepụta nchebe siri ike megide mwakpo nke ndị egwuregwu ndị ọzọ.
Ka beta na-agbasawanye na egwuregwu ndị ọzọ, njupụta dị ka nke anyị nwere taa ga-apụta ọtụtụ oge. Vidio na na-egosi akụkụ nke ihe anyị maralarị na nke ahụ na-eme ka anyị nwee olileanya na oge ụfọdụ a ga-ebupụta beta ọha na anyị nwere ike ịnweta ma hụ ma egwuregwu ahụ ọ ga-ekpuchi mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ Pokémon jikọtara n'oge ụfọdụ na ndụ ha.
Egwuregwu vidio na-atọ ụtọ maka ihe niile ọ pụtara na maka nke ahụ Ezigbo eziokwu nke Pokémon ga-ebute ụzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » More nke Pokémon Go gameplay si vidiyo na YouTube
Finch bụ ezigbo ihe ọzọ dị ka onye ahịa Twitter iji dochie Fenix
Ngwa YouTube na-emezigharị ụlọ ma melite vidiyo ndị a tụrụ aro